Logitech Group Video Conferencing အကြောင်း ~ The ICT.com.mm Blog
News, Review, Webcams
Logitech Group Video Conferencing အကြောင်း
HD အရည်အသွေးနဲ့ အခန်းကျယ်တစ်ခုကနေ လူအယောက် ၂၀ လောက်နဲ့ video conferencing လုပ်နိုင်တဲ့ Logitech Group Video Conferencing-22 အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
အစုအဖွဲ့လိုက် စကားပြောမယ်ဆိုရင် အဝေးဆုံး ၂၈ ပေအထိ အသံကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနိုင်ပြီး လူအနည်းအများအလိုက် ၉၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်း ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံး စပီကာဖုန်းနဲ့ အရေအတွက်ထပ်တိုးနိုင်တဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းတွေသုံးပြီး HD အရည်အသွေးနဲ့ အသံကို ပီသကြည်လင်စွာ ကြားရစေပါတယ်။ video conferencing လုပ်ဖို့ လွယ်ကူပြီးတော့ ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာတော့ autofocus HD 1080p ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ OS အနေနဲ့ကတော့ Windows 7, 8. 1 or 10, Mac OS X 10.7နှစ်သက်ရာနဲ့ တွဲဖက်သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
အခုမိတ်ဆက်တဲ့ Logitech Group Video Conferencing နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအပြင် မိသားစုလိုက်၊ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက် video chat ရရင်လည်း သိပ်ပျော်စရာကောင်းပေါ့။
ဈေးနှုန်းက K1,569,750 နဲ့ Warranty ၂ နှစ်ပေးထားပါတယ်။
ဝယ်မယ်ဆိုရင် အောက်က link လေးကို နှိပ်လိုက်နော်။
Newer Asus Zenbook UX581GV-H2035T Celestial Blue (i7-9th Gen) အကြောင်း
Older Jumper EZBook S5 Gray အကြောင်း